Shariif Sheikh oo eedeyn iyo hanjabaad iskugu daray madaxda dowladda federaalka | Somsoon
Home WARAR Shariif Sheikh oo eedeyn iyo hanjabaad iskugu daray madaxda dowladda federaalka
Shariif Sheikh Axmed Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo Muqdisho warbaahinta kula hadlay xilli uu ka soo laabtay safar ay ku tageen magalada Beledweyne ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxda dowladda federaalka oo uu sheegay in maanta amarkooda loogu xayiray Garoonka diyaaradaha ee Aadan-Cadde.
Waxaa uu sheegay in aysan u dul qaadan doonin ficilada ay madaxda dowladda fedelaaku ku ka cayaan, kuwaas oo uu ka carabaabay caburinta Shacabka iyo madaxdii hore dalka, islamarkaana ay qaadi doonaan tilaabadda ku haboon hadii sidaan ay wax ku sii socdaan.
Madaxweyne Shariif ayaa ku dhaartay in magaalada xoog looga saarayo madaxda talada heysa haddii aanay joojin ku tumashada sharciga oo uu sheegay in ay soo laa laabatay.
“Magaalada waxaa joogi jiray mooryaan awood ayaa looga saaray, ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab ayaa sidoo kale awood looga saaray, marka kuwa hada jooga ma kuwaas ayey ka awood badan yihiin? waa maya, wallahi xoog ayaan uga saareynaa magaalada, haddii aanay joojin sharciga ay ku tumanayaan” ayuu yiri Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore ee dalka.
Dadka shacabka ah ee wax ka tabanaya xukuumadda hadda talisa ayuu ka dalbaday in ay cabashadooda u soo gudbistaan Madasha Xisbiyada Qaran ee uu isagu hoggaamiyaha ka yahay, isagoo balan qaaday in ay si deg deg ah uga jawaabayaan cashada shacabka, waxa uuna wacad ku maray in ay gaarsiinayaan halka ugu dambeysa.
Hadalka Shariif ayaa daba jooga xayiraad maanta loogu gaystay gudaha garoonka Aadan Cadde, iyadoo markii loo ogolaaday in ay ka duulaan garoonka mar kale loo diiday in ay ka degaan garoonka diyaaraha ee magaalada Beledweyne oo ay ku sii jeedeen, waxayna ku dhawaadeen in ay Muqdisho ku soo laabtaan.
Article horeFormer Presidents arrive to the flood affected town of Baladwein
Article socoda Xasan Sheikh oo ku eedeeyay madaxda dowladda in si ula kac ah ay uga dambeeyeen xayiraadii maanta baaqna u diray shacabka